जहाजको पाङ्ग्रा नखुल्दा आकाशमै फनफनी, धावनमार्गमा स्याल र बँदेलको परेड ! - Nagarik Today
होम » जहाजको पाङ्ग्रा नखुल्दा आकाशमै फनफनी, धावनमार्गमा स्याल र बँदेलको परेड !
Blurred image of commercial or cargo plane moving fast downwards. Fear of flying. plane in the sky and the motion
२०७७ पुस ४ गते बुद्ध एयरको उडान नम्बर ६०७ नम्बरको जहाज नियमित उडानमार्फत यात्रु बोकेर जनकपुरतर्फ उड्यो । तर, जहाज सो दिन जनकपुर नगएर पोखरातर्फ हान्नियो । जनकपुर गन्तव्य भएका यात्रुहरूले तब आफूहरू पोखरा आइपुगेको चाल पाए, जब विमान परिचारिका (एअरहोस्टेस) ले ‘अहिले हामी पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गरेका छौं । बाहिरको तापक्रम २२ डिग्री सेल्सियस रहेको छ,’ भनिन् । जहाजमै होहल्ला मच्चियो, तत्काल एयरहोस्टले चालकदललाई यात्रुले गरेको विरोधबारे जानकारी गराइन् । तब, तत्काल पोखराबाट जनकपुर सीधा उडान अनुमति मागियो र जहाज जनकपुर हानियो ।
बुद्ध एयरको ९ एनएएनआई एटीआर कल साइन जहाज गत असोज ११ गते काठमाडौंबाट विराटनगरतर्फ उड्दै थियो । विराटनगर विमानस्थल नजिकिँदै गर्दा पाइलटले जहाजको पाङ्ग्रा (ल्यान्डिङ गियर) खोल्न स्वीच अन गरे । तर, इन्डिकेटर (संकेत गर्ने लाइट) ले पाङ्ग्रा खुलेको संकेत नै गरेन । ल्यान्डिङ गियरमा समस्या देखिएपछि पाइलटले पुनः जहाज काठमाडौँ नै फर्काए । काठमाडौंको आकाशमा पनि पाइलटले पाङ्ग्रा खोल्न स्वीच अन गरे । अझै पाङ्ग्रा खुलेको संकेत इन्डिकेटरले गरेन । पाइलटले जहाजलाई आकाशमै १०–१२ फन्का घुमाइरहे ।
भएको के रहेछ भने, जहाज विराटनगर पुगेर ल्यान्ड गर्ने बेला पाइलटले ल्यान्डिङ गियर खुलेको÷नखुलेको थाहा नै पाएनछन् । प्राविधिक समस्याका कारण इन्डिकेटरले जहाजको अघिल्लो पाङ्ग्रा खुलेको या नखुलेको केही पनि संकेत नदिएपछि पाइलट अलमलमा परे । खासमा पाङ्ग्रा खुलेको रहेछ । यद्यपि, घटनामा चालकलाई नै दोषी देखाइयो । अहिले पनि यो घटना अध्ययनकै विषय छ । तर, घटना निकै रोचक र चर्चाको विषय बन्यो ।
बुधबार साँझ साढे ७ बजे बुद्ध एयरको ७२ सिटे जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा स्यालसँग ठोक्किएको हो । जहाज स्यालसँग ठोक्किए पनि कुनै अप्रिय घटना नघटेको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ । बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द बस्नेतले विमानस्थलमा घाँसे मैदान हुँदा जंगली जनावरहरुको बिगबिगी बढेको र यसले दुर्घटना निम्त्याएको बताए ।